Sida loo sameeyo drive adag lagu ogaanayo
Drive Hard waa qaybta ugu hallayn karo ee Nidaamka koombiyuutar kasta. Haddii aan la kor u fulineynin in sumaddii markaas waxaa aad u adag in ay sii nidaamka si. Qaybta ugu muhiimsan ee nidaamka wax computer ie OS deggan gal drive adag oo sabab la mid ah waxa aad u muhiim ah in la ogaado in caafimaadka drive adag waa mid aad u muhiim ah. Haddii user ah ayaa dareensan in drive adag oo aan si fiican u shaqeeya markaas waxaa aad muhiim u ah in la ogaado in ay Baadhista drive adag in la fuliyo. Waxaa jira siyaabo dhawr ah oo sidaas samaynaya iyo kuwa ugu muhiimsan ee hoos ku qoran.
Hubi feature Disk
Waxaa la dhisay shaqada OS iyo uu jiro si ay u caawiyaan dadka isticmaala tan iyo markii la aasaasay. Jidka in la raaco waa Start> xaq guji drive in ay tahay in la marsiiyey> Guryaha> Tools> jeeg Hadda. Waxaa ka saari doonaan wax kasta oo arrimaha ku drive ay adag tahay in la soo xulay. qaybaha xun , iskutallaabtiisana lala files, kooxahaasi lumay iyo arrimaha la xidhiidha buugga la xalin doono si buuxda.
Soo-saareyaasha of inta badan casriga ah drives adag waa inuu xaqiijiyo in nidaamka hirgalinta is jiro si loo hubiyo in arrimaha drive adag aan lagu soo wargelin oo keliya, laakiin sidoo kale la xalin. Waxaa sidoo kale loo yaqaan baaritaano SMART iyo kuwan waxaa soo baxay disk laftiisa u ogolaanaya dadka isticmaala inay dib u eegaan warbixinta iyo dhibaatooyinka ka drives adag kala kulmaan. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in kulanka waxaa kaloo lagula talinayaa arrin gaar ah.
Barnaamijyada cid saddexaad
Waxaa jira tobanaan kun oo barnaamijyo software cudurka taas oo ka dhigaysa hubiyo in ay khaladaad drive adag ee la ogaan karaa oo xalin mar barnaamijka waddaa. Kuwani waa labada utilities freeware iyo bixisay si loo caawiyo dadka isticmaala ee arrintan la xiriira si loo hubiyo in ugu wanaagsan ee la sameeyo si drives ay adag tahay si ay uga bixi lahaayeen arrinta ugu dhaqso badan.
Codes baadi Common inta lagu jiro gaari ku adag cudurka
socda waa liiska codes baadi ugu badan in qofka kulan halka socda drive adag cudurka. Liiska macluumaadka weyn laakiin kaliya codes kuwa Waxaa halkan ku xusan in arbushin ilaa joogto ah diiqayaa users ah.
qaladkii si toos ah loola jeedaa in drive adag ayaa xun iyo waxay u baahan badalka deg deg ah. The Sata ama bixisaa bedelka cable arrintan la xiriira laga yaabaa in qaar ka mid ah dadka isticmaala laakiin waa habka kaliya ee ku hareeraysan aan xal ku habboon. Code buuxda baadi taas oo u muuqata waa "Hard Drive (d) - S N (s) imtixaanka /, is aan lagu guulaysan. Xaaladda = (x) "
code qalad ayaa ka dhigan in imtixaanka is ma buuxiso sabab u fekero. Sababta ugu wayn oo sabab u ah arrintan waa markii user a isku dayaa inuu tijaabada cudur-aqoonsiga saaraha isticmaalaya SSD markuu waa mid ku habboon bixisaa / Sata. Si kastaba ha ahaatee sababta ugu badan waa drive adag SSD failure. Ayaa baadi code la xiriira waa "Hard (magac) Drive - Self Test aanay dhamaystiran."
baadi Tani waxay khusaysaa daaqadaha 7, server 2008, 2012 iyo vista. Ayaa la xiriira qalad iyo sharaxaadda oo u muuqata waa "Windows ayaa joojiyey qalab sababtoo ah waxa uu ku sheegay dhibaato. (Code 43). "Darawalka Qalabka la socodsiinayaa daaqadaha in qalab gaar ah oo ay dhacdo in tani ay tahay drive adag ayaa ku guuldareystay shaqada iyo waxa ay sidoo kale sabab u noqon kara sabab u tahay qalab failure darawalka.
Waxaa jira saddex sababood ee ugu waaweyn oo ka mid ah qalad sida BIOS sakhiray aan si, RAM Qalad, arrimaha Registry. Sharaxaad baadi ayaa la akhriyo sida "file ayaa I386 \_ Ntkrnlmp.exe laga yaabaa inaan la rarin. Code qalad waa 7. "Waxaa jira dhowr ka mid ah qalab is cudurka la heli karo online si loo hubiyo in arrinta la xalin. Mid ka mid ah ayaa laga heli karaa http://errortools.com/windows/how-to-fix-error-code-7/ ay noqon karaan caawimo weyn u isticmaala ee arrintan la xiriira.
Sixidda baadi Code 0142
Sida drive adag tahay in la bedelo si arrintan la xiriira geeddi-socodka oo dhan uu yahay sida soo socota:
Marka xogta ayaa la badbaadiyey oo isticmaalaya utility kasta oo baabuur cusub adag tahay in la iibsaday:
Dabool Kombiyuutarka waa in la furay in ay sii wadi:
Marka kiiska drive adag waxa uu ku yaalaa boolal waa in laga saaro,
Drive The adag waa in riixayaa daboolka ka dib markii isku xidha dekedda si loo xaliyo arrinta oo dhamays ee buuxa:
Sixidda baadi Code 0145
Casriyaynta hardware ka dhigi kara suuragal ah in dadka isticmaala ee labada daaqadaha iyo Mac OS si loo xaliyo arrinta. Tallaabooyinka ku jira:
Waxyaabaha xawaaladaha ayaa waxaa in la falanqeeyay talaabadii ugu horeysay ee geeddi-socodka,
Tallaabada labaad ee drive ee adag waa in la nadiifiyaa:
Barnaamijyada la abuuro arimo la falanqeeyay waa in la sii wado geedi socodka:
Marka la sameeyo OS waa in la meeleeyey in meesha laga saaro xeerka baadi 0145
Sixidda baadi Code 43
Tallaabooyinka soo socda ay ku lug leeyihiin in arrintan la xiriira:
User wuxuu u baahan yahay in nooca sysdm.cpl ka dib soo socda jidka Start> Orod si interface la rabay u muuqataa,
User ayaa markaas u baahan yahay jaraa'id tab hardware> Tababaraha qalabka:
Drive disk waa in la xaq u riixi si ay u hubiyaan in doorasho uninstall la riixi iyo darawallada ugu dambeeyay ka dibna in la soo bixi website saaraha ayaa ah in la hubiyo in arrinta la xalin.
Sixidda baadi Code 7
Waxaa keena xanuunada sabab RAM wakhtiga intiisa badan. Soo socda waa kulankii deg deg ah in arrintan la xiriira oo loogu balanqaadayo xal la hubo ah,
Nooca RAM waa in la hubiyaa talaabadii ugu horeysay ee geeddi-socodka,
Marka iibka ayaa lagu sameeyey dabool computer waa in la furay:
Muddo godka RAM ka mid ah hore waa in la saaro iyo mid cusub waa in lagu xiro si ay u dhammaystiraan geedi socodka ka:
Tool si loo soo celiyo xogta laga gaari ku adag in kiiska qalad kasta oo sababay khasaaro xogta
The kabashada Wondershare xogta barnaamijka waa mid ka mid ah danabka ugu wanaagsan ee la heli karo ee suuqa si ay u hubiyaan in arrinta dib u soo kabashada xogta jirin kulanka oo dhan. Waxaa hubiyaa in dadka isticmaala ee dhammaan heerarka casriga isticmaali kartaa barnaamijka fudayd weyn iyo qanacsanaanta iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in barnaamijka taageertaa laba interfaces sida utility saaxir iyo utility sare in sidoo kale loo yaqaan habka caadiga ah. The interface ka shaqeynayaan ee barnaamijka waa laga cabsado oo user marnaba ka Helayn adag ee ka hawlgala barnaamijka sida loo sameeyo iyada oo aan wax arrin oo dhib.
> Resource > Hard Drive > Sida loo hagaajin drive adag marka qalad dhacdaa